2 Sabab Oo Ciidanka Mareykana Ku Qasbay In Soomaliya Ka Baxaan | Xaqiiqonews
2 Sabab Oo Ciidanka Mareykana Ku Qasbay In Soomaliya Ka Baxaan
Wey na caawiyaan ama wey nagu soo duuleen wixii aad rabto iska aaminsanow, waxaa jirta xaqiiqo aan la inikiri karin : Ciidanka Mareykanka wixii ay noo galeen wixii ay naga gudeen ayaa ka badan.
XAQIIQO NEWS- WAR IYO DHAMMANTIIS
Hadii uu jiro waji aan ugu mahadcelin karno Trump , waxaan dhihi lahaa go’aankan Trump uu ciidamadiisa Soomaaliya uga saarayo ayaa naga mudan in aan uga mahadcelino mahadsanid Trump.
Warka: Trump ayaa jimcadii tagtay amar ku bixiyey ciidamada Mereykanka- oo lagu qiyaasay 700 askari- in laga soo saaro gudaha Soomaaliya, dhacdadaas oo wajiyo badan loo fasiray.
Dhammaadkiisa: Waa ay iska muuqatay maalin un Mareykanka in uu iskaga bixi doono Soomaaliya, laakiin arinta jahawareerka keentay waxa aheyd: maxay xilligan uga soo aaday? maxay xilliga Trump ugu soo beegantay?
Waxaan sabarsiinayaa Df-ka iyo qof walbo oo aaminsanaa waxtarka joogitaanka ciidanka Mareykanka, asxaabta aan jeclahayow Mareykanka ilmahiisa ayuu badbaadsay-marka iska samra.
Taasi waa ay dhacday, uma baahna fasiraad dheeri ah, laakiin arinta falanqeynta nooga baahan waxa ay tahay maxaa ku qasbay xilligan ciidanka Mareykanka in ay baxaan.
Trump waxa uu aad uga takhasusay cilmiga dhaqaalaha, tallaabada ciidamadiisa uga saaray Soomaaliya ma aheyn mid “laab lakac ah”, amarka waxa uu ku saabsanaa “ka bixitaanka Soomaaliya” hase yeeshee u jeedka waxa uu ahaa badbaadinta dhaqaalaha sii dumaya ee Mareykanka taasi oo uu uga sii daray saf marka Covid-19.
Mahadsanid Trump waxa aad badbaadisay dhaqaalahiina, sidoo kale waxa aad badbaadisay dadkeena.
Sabab kale oo lagu doodi karo waxa waaye, Mareykanka kama bixin Soomaaliya, madaama ciidankiisa oo kaliya uu la baxaayo, taasi macnaheedu waxa waaye qabablkiisa dagaalka sida darooniska oo kale waa ay sii jiri doonaan.
Wajigga dagaaalka oo isbadala kama dhigna “dhammaadka dagaalka”, John iyo Jemis dalka waa laga saaray balse Mq-predator iyo qalabyada biiba ee wax dila waxa ay ku sii jiri doonaan Soomaaliya, sida amarka Trump ku jirtay.